ए गाँठे ! | Neer's Blog
← “यो कोटा सिस्टमको अन्त्य कहिले हुन्छ ?”
टेन्सबर्ग कथा →
Posted on May 29, 2017	by Neer
सन् २०१४ मा शाहरुख खान अभिनित चलचित्र ‘ह्यापी न्यू यर’ प्रदर्शन भयो । चलचित्र विभिन्न कारणले चर्चामा रह्यो । दिपावलीमा रिलिज भएको चलचित्रमा दमदार कलाकारहरू त थिए नै, चलचित्र शाहरुख खानकै नामले मात्रै पनि हिट हुने निश्चित थियो । तर मेरो ध्यान भने चलचित्रको अर्को रमाइलो पक्षले तानेको थियो । चलचित्रका लागि शाहरूखले पेटमा बनाएको गाँठैगाँठोसहितको सुगठित शरीर फोटोसपबाट बनाइएको भनेपछि त्यसबारे बहसहरू भए ।
भलै त्यो बजारिया चलचित्र हेर्ने रहर मलाई कहिले भएन, तर त्यस्तै शरीर मैले पनि बनाउन सक्छु कि भन्ने महत्वकांक्षा भने पलाउन थालिसकेको थियो । व्यावहारिक भएर सोच्दा भने पुक्क उठेको पेट मात्र घटाउन पाए पनि ठूलै उपलब्धि हुने ज्ञान भो । खेलकुद, व्यायामहरूमा सानैदेखि रूचि भए पनि पछिल्लो समय कामको व्यस्तता, घर व्यवहारमा अल्झिँदा त्यसका लागि पर्याप्त समय भएन । लगभग एक दशकको व्यावसायिक अनुभवपछि एकोहोरोपनबाट छुट्कारा लिन पनि विश्राम लिने निर्णय गत वर्ष लिए । त्यसपछि भने आफ्नो रूचिका विषयहरू अध्ययन, चलचित्र, व्यायामहरूमा समय दिन थाले ।
यसै क्रममा घर नजिकै रहेको हेल्थ क्लब जान थाले । क्लबका गुरुको नियमित निगरानीमा सामान्य व्यायामहरूबाट सुरुवात गरे । सुरुमा सजिलो भने भएन । कुर्सीमा ठस्स बसेर काम गर्ने बानी भएको शरीरलाई उछलकुद गराएर पसिना निकाल्दा अवश्य गाह्रो हुन्छ । बिहानै व्यायाम गरेपछि शरीर दिउँसभर चङ्गा, स्फूर्त हुने र विचारहरू पनि सकारात्मक आउने अनुभव हुने थालेको थियो । यसै क्रममा पुरानो रोगले पुन: च्यापेपछि दिल्लीमा उपचारको क्रममा तीन महिना बिताउनु पर्‌यो । व्यायामलाई आफ्नो बानी बनाइसकेकोले सो अवधिमा साह्रै सकसक भयो ।
नेपाल फर्किने बित्तिकै व्यायामलाई दैनिकी बनाउन थाले । रोगले मेरो शरीरलाई कमजोर बनाए पनि आफ्नो आत्मबललाई भने मैले कमजोर बनाउन दिइन । म थप आत्मविश्वाससहित पुनः व्यायाम गर्न थालेको छु । गत वर्ष ७० किलो रहेको मेरो हाल वजन ६० किलोभन्दा कम छ । पेट मात्र घटाउने भनेर म व्यायाम गर्न लागेको हुँ । हाल आएर पेट घटेर गाँठाहरूसमेत देखिन थालेका छन् । शरीरमा आँफै निक्लेका गाँठाहरू हानीकारक हुन्छन् तर आँफैले निकालेका गाँठाहरू भने लाभदायक नै हुन्छन् है । दुवैको अनुभव मैले लिइसकेकोछु, यसमा आँखा चिम्लेर मलाई पत्याउनु भए हुन्छ ।
शरीरलाई सुगठित बनाएर गाठाहरू निकाल्ने अभियानमा छु भन्दा साथीहरूले मजाक उडाएको पनि हिजै मात्र हो । जीवनकालका अनुभव/उपलब्धि (Bucket list) मा शरीरलाई सुगठित बनाउने भनी मैले राखेको थिए । यो प्राप्त हुने क्रममा रहेकोमा म साह्रै उत्साहित छु । सकिन्न कि भन्ने धेरै पटक लागे पनि जिमखानामा अन्य साथीभाइहरूले गरेको मेहनत देखेर आफैँलाई प्रेरित गर्थे । अहिले मेरो मेहनतले अरू पनि प्रेरित होस् भनेर पनि व्यायाम गर्ने गर्छु ।
शरीरलाई स्वस्थ राख्न प्रशस्त पसिना बगाउन भने तयार हुनुपर्छ । पसिनामार्फत नै शरीरका विकारहरू पनि निस्कने हुन् । व्यायाम गर्न शुरु गर्नअघि भने आफ्नो उद्देश्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्वस्थ र स्फूर्त रहने हो भने बिहान मर्निङ वक, पौडी खेल्ने, दौडिने, साइकल चलाउने गर्दा पनि हुन्छ । त्यो भन्दा बढी शरीर सुगठित बनाउने हो भने कुनै जिमखानाको सदस्य भएर गुरुको नियमित निगरानीमा व्यायाम गर्नुपर्छ । समय मिल्दैन भनि बसिराख्नु भयो भने तपाईले रोगलाई निम्त्याइ राख्नुभएको छ । मलाई रोगले गाँज्नुको कारण मेरो अस्वस्थ जीवन शैली पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ । तर यो अहिले परिवर्तन भएको छ (फोटोमा पनि तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ) ।
म चारपटक कडा रोगको उपचार व्यहोरीसकेको व्यक्तिले त गर्न सक्नेरहेछु, तपाईहरूले त सहजै सक्नुहुन्छ । आफ्नो शरीरलाई कस्तो बनाउने भन्ने दृढ आत्मबल भने चाहिन्छ । व्यायामलाई बानी बनाउनुहोस् । शरीरको आफूमाथि नियन्त्रण भन्दा पनि शरीरमाथि आफ्नो नियन्त्रण हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुहोस् । स्वास्थ्य नै धन हो भन्छन् । यो धन त कसैले लुट्ने, चोर्ने डर पनि हुँदैन । त्यसैले व्यायाम गर्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् ।
This entry was posted in Experiences and tagged exercise, goals, inspiration, workout. Bookmark the permalink.